Sunday May 19, 2019 - 14:36:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hey'adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta deeq lacageed waxa ay u qeybisay Haween danyar ah oo ku nool magaalada Muqdisho.
Munaasabad ka dhacday degmada Xamar weyne ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa Boqol haween dan yar ah lagu guddoonsiiyey lacag Kaash ah oo dhan $100 Dollar qof kasta, si ay ugu kaashadaan baahiyohooda aasaasiga ah.
Gudoomiyaha Hay’adda Hormuud Found Mudane Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa Qiray in Mar walba Maamulka Hay’adda Hormuud Foundation u taagan yihiin sidii ay dadka Soomaaliyeed ee dhibaateyan u Caawinlahaayeen.
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa sheegay in tani ay qeyb ka tahay Dadaalo dheeraad ah oo ay Hey’adda Hormuud Foundation ay ku caawineyso Dadka ay ku adagtahay in ay maareeyaan Noloshooda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobalka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab oo Haweenkan kasoo uruurisay qaar ka mid ah qoysaska dan yarta ah ee ee ku nool Degmooyinka Gobalka Waxay iyada oo ilmeyneysa sheegtay in dadkan Xaaladda ay ku jiraan Awgeed ay Hay’adda Hormuud Foundation uga codsadeen in la caawiyo.
Qaar ka mid ah Haweenka la siiyey deeqdan dhaqaale oo isugu jiray Haween Waayeelo ah, kuwa heysta Carruur Agoomo ah, kuwa aan Awoodin in ay iska bixiyan Kiradda Guryaha, iyo qaar aan Awoodin in ay iska deberaan waxyaabaha aasaaska u ah nolosha, ayaa waxay ay si dareen leh mahad naq ugu jeediyey Hey’adda Hormuud Foundation, waxa ayna sheegeen in tani ay tahay mid lama filaan ah kana haqab tiri karta baahidii ay u qabeen in ay hellaan gar gaarkan oo kale.
Tan iyo Markii la guda galay Bisha Barakeysan ee Ramadaan ayaa Shirkadda Hormuud waxay waday Caawinaad iyo gurmad ay u fidineyso Dadka gargaarka u baahan eek u nool Degmooyinka Gobalka Banaadir sida: Maxaabiista, Agoonta, Naafada xoogga Dalka & Haweenka danyarta ah.